Ogaden News Agency (ONA) – Shirka Qawmiyadaha (Beherbehero Sabooj) oo Cabdi iley la cifanayo fashilaadna qarka u saaran
Shirka Qawmiyadaha (Beherbehero Sabooj) oo Cabdi iley la cifanayo fashilaadna qarka u saaran
Posted by ONA Admin	/ October 30, 2013
Nuura Afgaab – Sida laga warqabay lana wada sugayey waxaa dalka Ogadeniya gaar ahaan casimada magalada Jigjiga lagu qabanayey xuskii waxa loogu yeedhay shirka qoomiyadaha Itoobiya oo afka axmaarigana loogu yeedho(Beherbehero Sabooj). Xuskan maalinta qoomiyadaha Itoobiya ayaa la aasaasay ama la an sixiyey sanadii 2005- oo ku beegan tirsiga Itoobiya1997, waxaana sameyey hogaamiyihii inta badan xukumay itoobiya loogana baratay cadaasika iyo xasuuqa shucuubta ku nool Itobiya gaar ahaan Ogadeniya, waxayna aheyd xili aad loogu gilgilay miiska siyaasada aadna ugu adkeed xaaladu. Wuxuuna u sameeyay xuskan uu ugu magacadaray (Beherbehero Sabooj), asagoo ku xumeynaya ama kula dagaalamaya qowmiyada markaa xukunka kala tartamaysay ee ah qoomiyada Axmaarada si dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Tigreega iyo Axmaarada u noqodo mid u dhexeeya qowmiyada axmarada iyo dhamaan qoomiyadah kale.
Xuska malintan ayaa ah inta badan lagu dacaayadeeya xukunkii Dergiga ee Mingisti Xayle Maryam, waxana aad loogu amanaaa Jabhadii Xoreynta Tigreega ee TPLF oo haysata xukunka Itoobiya. Faaiidooyinka kale ee EPRDF ay sheegto inay ka leedahay shirkan qawmiyadaha waxaa ka mid ah;
1- is dhax galka iyo is fahansiinta qowmiyadaha Itoobiya
2- kobaca dhaqaalaha oo hadaba kililkii lagu qabto u u hormaro
Hadaba gobolka Ogaden oo dagaalo iyo colaado soo jiitamay ka jiraan ayaa la qorsheeyay in uu marti galiyo sanadkan. Maamulka Cabdi ilay oo dacayado farabadan isticimaalay kuna adkeestay inuu qaban karo shirkaas, ayaa waxaa loo shubay lacago hormaris ah oo fara badan oo loogu tala galay diyaar garoowga xuska iyo dhisida magalada Jigjiga iyo meelihii ay dagi lahaayeen dadka imanaya. Maamulka Cabdi ilay ayaa lacagaha u iscimaalay arimaha nabad galiyada iyo la dagaalanka ONLF, isagoo ka cabsanaya inuu ku fashilmo xagga nabadgalyada. Waxaa la gadhay shirkii qoomiyadaha iyo Jigjiga oo boodhku ka duulayo, biyo la aan iyo amaan xumo baahsanina ka jirto. Cabdi ilay ayaa ku cataabay oo ku calaacalay bilihii ina soo dhafay in xafiisyada biyaha iyo wadooyinka haystaan dad ka tirsan Ubo oo fashilinaya xuska qoomiayadaha waan ogaa, asagoo kala diray xafiiska biyaha shaqaalihii joogay oo gaadhayey 140, kolka laga reebo gabadha wasiirka ka ah ee Fartuun ah. Waxaa kaloo xusid mudan hoteelo dhoor ah oo dhismahoodu ka socoday Jigjiga laguna raja waynaa in ay dagaan martida iyo ka soo qabgalayaasha shirka in ay badhtanka marayan mana dhawa, dadkii dhisayay ayaa sabab ka dhigtay in ay biyo la aanta daradeed ay u rageen dhismaha hoteladu. Hadaba maamulka kililka oo walaac badan iyo waji gabax ay ku noqotay goobta ay dajin lahayeen martida ayaa waxay amreen in dhaman wasaradaha kililka laga guro qalabka yaala, guryana magalada ka soo kireestaan mudo bil ah, xafiisyadana soo dhaqaan si ay u dagan martidu.
Durba waxaa biloowday guux iyo cabasho, waxaana lagu dacweeyay xafiisyadii dawalada in la seexinayo martida iyo madaxda imanaysa shirka qawmiyadaha, shaqooyinkii kililkanu bil dhan hakadanayaan. Maamulka Cabdi ilay ayaa ku andacooday in aamanka martida lagu ilalin karo uun xerada kililka gudaheeda oo aan la dhayalsan karin hanjabaada iyo halista ka imaan karta alshabaab oo ah siduu hadda ku daboolo jabka ka haysta jabhada ONLF oo horey uu ugu sheegay dawladda inuu tirtiray.
Magalada ayaa waxaa ka jira bandoow gadiidka ah waxana lagu dhexe daadiyey ciidamo aad u hubaysan, ciidamo tababar kujiray oo luyupolice ah ayaa iyagana la soo fasaxay, laguna sii dayey magalada, shacabka magalada ayaa waxaa ka badan ciidamada markaad fiiriso wadooyinka waxana lawaydiinayaa dadka aqoonsiyo, waxaa buuxa jelasha, isu socodka magaladun aad ayuu u yar yahay.
Magalada ayaa habeena dhawayd lagu daadiyey waraqo hanjabaad ah oo ay qoreen sida laga akhriyay jabhada ONLF. Malintan xuska qoomiyadaha ayaa waxaa ka laaban hadda 40bari waxaana sugaynaa sida ay ugu qabsoonto.